Afrika: Koonfur Afrika Dal Ku Dayasho Mudan
Dalka Koonfur Afrika oo leh taariikh dheer muddo dheerna ka talinayey caddaan tiro yar oo dhowr boqol oo sano ka hor soo degay, waxayna muddo dheer madaxa ka heysteen oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka soomiyeen dadka tirada badan ee waddanka u dhashay, waxaa dalkaas hadda ku nool dhowr iyo afartan million oo qof oo midabo badan kala leh, madowgu ha ugu badnaadee.
Malaha marka la maqlo Koonfur Afrika waxaa qof kasta madaxiisa ku soo dhacaya NELSON MANDELA iyo AFRICAN NATIONAL CONGRESS ( ANC), waxay siyaasaddii guracneyd ee midabtakoorka(APARTHEID) soo gebagebowday 1989kii markaas oo madaxweyne P.W.BOTHA oo uu bedelay F.W.De KLERK uu xabsiga ka soo daayey Nelson Mandela 27 sano kadib. Waxaana la qoray dastuur cusub, iyadoo 1994kii doorashooyin xisbiyo badan ay ku tartameen ay dalka ka dhaceen waxaana si weyn guuleystay xisbiga ANC, waxaana maxweyne dalka ka noqday Nelson Mandela oo uu uga dambeeyey THABO MBEKI.
Sida magaca dalkaba ku xusan, waddanka Koonfur Afrika waa Dalweyne dhacdiida Afrikada gacankeeda Koonfureed. Dhinaca galbeed waxa kaga yaalla badwenta Atlaantikada, dhinaca koonfur barina Badweynta Hindiya. Dalkanu wuxu daris la yahay wadamada Naabiibiya (woqooyi galbeed), Zimbabwe iyo Botoswaana (woqooyi); Moosambiik iyo Swaziland oo ka xiga dhinaca woqooyi bari.
Boqortooyada laysku yidhaahdo Lesooto ayaa waxay dahaadh ku samaysaa koonfurta bari ee dalka K/Afrika, taasi oo sida la sheegey ku fadhida dhul weyne ballaadhan oo ku dhawaad saddex jeer ka badan midda gobolka California ee USA ku fadhiyo .
Cidhifka koonfureed ee ugu shisheeya Afrika waa Cape Agulhas, oo ku yaala Galbeedka ‘Cape Province’ ilaa qiyaas dhan 100 mi (161 km) dhinaca koonfur bari ee ‘Cape of Good Hope’.
Qabiilka loo yaqaanno ‘San’ ayaa ahaa dadkii ugu horreeyay ee sal dhiga dalka K/Afrika; waxana ku xigay qabiilooyinka Khoikhio iyo Bantu. Dadkii ugu horreeyay ee dhinaca Yurub uga yimidday Koonfur Afrika ayaa iyaguna waxay ahaayeen Dutch oo markii ugu horreysay kusoo degay gobolka ‘Cape of Good Hope’, markii sannadku ahaa 1652, kuwaasi oo bilaabay gumaysi dhammaadkii qarnigii 18 naad, iyagoo tiradoodu kaliya dhammayd 15,000 .
Hadaba kooxdaasi Dutchka ahayd ayaa waxa loo yaqaanay Boers ama Afrikaaners. Waxayna ku hadli jireen lahjad Dhaj ah oo loo yaqaanay Afrikaans. Afrikaans waxay isku dayeen wakhti sidaas u sii hooreeyay sida sannadkii 1795kii inay sameeyaan jamhuuriyad xor ah.
Heliddii Dheemmanka ee sannadkii 1867 iyo Dahabka oo isna ka danbeeyay sagaal sannadood ayaa misna wuxu keenay inay kusoo aguugaan dul ka socoto badani isla dhulkaasi. Taaasina waxay ku kalliftay Ra’siisal Wasaarihii Cape Colony, Cecil Rhodes inuu soo saaro xayiraad lagu xakamaynayo dadkaasi. Qorshihii Ra’iisal Wasaare Rhodes ku damacsanaa inuu ku jabiyo dadka uu ugu yeedhay jabhadaha dul ka socotada ah, ayaa waxa u xil saarnaa ciidamo militari oo hoos yimada Leander Starr.Jameson. Sannadkii 1895 Jameson oo ujeedadiisu ahayd inuu wax bad-baadiyo ayaa gefay marinkiisii, taasi oo ku qasabtay inuu is casilo Ra’iisul wasaare Rhodes.
1936kii dadka madoow ee codeeya (Black Voters) waxa laga saaray diiwaankii cod bixiyayaasha. Ilaa iyo kala badh qarnigii ku xigayna, wixii an ahayn dadka midabkoodu caddaanka yahay waxa si awood sheegasho leh looga saaray inay ku noolaadaan dhulka loo qoondeeyay dadka caddaanka ah. Qodobka loo yaqaano ‘The Group Areas Acts of 1950 and 1986’ ayaa loo cuskaday in dad ka badan Hal Milyan iyo nus (1.5 Million) oo afrikaanka madoow ah laga saaro magaalooyinka waaweyn lana geeyo daabiyadaha iyo hayjadaha duleedka ama duleedka magaalooyinka. Dadkaasina waxay halkaas ugu abaadeen sharci darrada xaaraanta ahayd oo dhaxalsiisay inay ku noolaadaan cawa daranta nolosha ee cidlo iyo ciirsi la’aanta ahayd, nolol aad iyo aad u foolxun una qallafsan ayay ku qaateen.
hadaba sannadkii 1961 ayaa dalka Koonfur Afrika caddeeyay inuu yahay Jamhuuriyad xor ah, wuxuna dhaawac u geystay xidhiidhkii uu la lahaa ururka loo yaqaano Barwaaqo Sooranka (Common Wealth), oo iyagu si weyn u diidanaa qawaaniinta dalkaasi ee cunsuriyaysan. Balse taasi waxba kama badalin in Ururka Caddaanka Waddaniyiinta Awoodda Sare (The White Supremacist National Party) uu dalkaasi kusii golomoso soddonkii sanadood ee xigay.
Sannadkii 1960ii waxa qudha laga wada jaray 70 qof oo madoow, kuwaasi oo magaalada Sharpesville ku samaynayay mudaharaad nabdoon. Isla sannadkaasina waxa la mamnuucay Ururkii waddaniyiinta dadka madoow ee ka hor jeeday midab kala sooca, ururkasi oo ahaa ANC. Afar sanadood (1964), ka dibna waxa jeelka loo taxaabay hogaamiyhii weynaa ee ururka ANC Nelson Mandela, oo lagu xukumay cimrigaa haku furto (Xabsi Daa’im)
Kacdoonka dadka madoow
Bilowgii kacdoonka dadka madoow ayaa dabadeedna sii xoogaystay oo ayaanba ayaanta ka danbaysa sii kordhayay. Sannadkii 1976 Kacdoonkii dadka madoow ee ka bilaambay magaalo madawda Suweeto ayaa ku fiday magaalooyinka kale ee dadka madoow, wuxuna geeystay qasaare xooggan oo ay ku qudh waayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 600. Marka laga bilaabo 1960kii ka hortaga midab takoorka heer caalami aad ayuu usii kordhayay. Qaramada Midoobay (UN) waxay saareen cunaqabatayn, waddamo kale oo badanina waxay cilaaqdkoodii ka goosteen Xukummadda Koonfur Afrika.
Cunsiriyaddii midabtakoorka (Aparatheid) ee dalka Koonfur Afrika, waxa u bilaabmay inay awoodeedii yaraato kadib markii jagada madaxweynimmo uu ninkii la odhan jiray F.W de Klerk ka badalay P.W. Botha. De Klerk wuxu xayiraaddii ka qaaday ururkii ANC isla mar ahaantaana wuxu jeelka kasoo daayay Nelson Mandela, oo muddo dhan 27 sanadood cimrigiisa ku dhammaystay jeelkaasi. Xusbigii uu hogaaminayay Buthelezi ee loo yaqaanay Inkata Freedom Party oo loo aanayn jiray inuu ahaa xisbi cilaaqaad la leh cunsuriyada ayaa isaguna wakhtiyadaas ku hawlanaa, iska hor imaadyo uu kaga hor tego xusbiga ANC
I991 ayaa koox jinsiyo badan (multiracial) ay hogaaminayaan Modnela iyo de-Klerk, qabteen shirkii Diimuqraadiga Koonfur Afrika (Convention Democratic South Africa – CODESA), waxayna bilaabeen inay dib u qoraan Distoorka dalka. 1993 ayaa waxay ku guulaysteen in lasoo saaray Distoorkii dalka oo mamnuucaya cunsuriyada, xoojinayana isku jirka jinsiyada (multiracial), isla mar ahaantaana taageeraya awooda dadka tirada bata (majority rule).
I994 ayaa waxa loo dareeray doorashadii ugu horreeysay ee jinsi kasta oo dalka Koonfur Afrika ahi ka qayb qaato, ahaydna doorashadii ugu xiisaha iyo xamaasada weyneeyd ee ka dhacda adduunweynahan. Doorashadaasina waxay ku dhammaatay guul ballaadhan oo usoo hoyatay xusbiga ANC, iyo hoggaamiyahadoo haybadda badnaa ee Nelson Mandela. Madaxweyne mudane Mandela wuxu sameeyay dawlad cusub oo ka koobnayd 6 wasiir oo ka socda xusbiga waddaniga ah ANC, iyo saddex ka socda xusbiga Inkata. Distoorkii dalkana dibaa loo habeeyay waxana la dhaqan galiyay 1996.
1997kii, mishanka Runta iyo dib u heshiinta (The Truth and Reconciliation Commission) oo uu hor kacayo wadaadka Desmond Tutu ayaa bilaabay inay dhegeystaan dacwadihii ku saabsanaa xadguub yadii Binu-Aadanimmo ee midab takoorka Koonfurta Afrika ka galeen waddaniyiinitii dhulka u dhashay ee madoobaa, muddooyinkii u dhaxeeyay 1960 – 1993. Sanadkii 1998, F.W .de Klerk, P.W, iyo hogaamiyaasha ANC ayaa hor yimidday Komishankan. Dadweynhuna way ku diirsadeen balse mararka qaarkood waxay keenaysay kala qoqobasho qarankani soo korayi aanu qaadi kareen.
Mudane Madaxweyne Mandela oo adduunweynuhu u aqoonsanyahay inuu yahay hogaamiyihii ugu fiirada dheeraa (most farsighted) uguna deeqsinnimada iyo daacadnimada badnaa ee dhinaca siyaasadda ee adduunkan soo mara ayaa wakhtigiisii xafiisku dhammaaday 1999. Mondela si sharaf badan ayuu xukunka dalka u sii daayay 1999, ruqsadna kaga qaatay siyaasaddii dalka. 2,June, 99) ayaa kadibna waxa la doortay madaxweynaha Thabo Mbeki, oo ahaa madaxweyne xigeenki Mandela iyo hogaamiyihii ANC.
Waxaa dhowaan jagadii maxweynennimo ee dalka iska casilay Mr: THABO MBEKI oo muddo 50 sano ah ka tirsanaa xisbiga ANC, inkastoo gudaha xisbiga uu cadaadis kaga yimid hadana wuxuu muujiyey biseyl siyaasadeed iyo waddaniyad, waxaa lagu eedeeyey in uu fara geliyey baaritaan dacwadeed (CRIMINAL INVESTIGATION) oo u dhaxeysa isaga iyo ninka la filayo in uu jagada uga dambeeyo ee JACOB ZUMA, labada nin oo uu hardan hoose uu ka dhaxeeyey.
Waxay aheyd in uu Thabo Mbeki xafiisaka sii joogo inta laga gaarayo doorashada sanadka 2009ka markaas oo la filayo in uu Jacob Zuma Madaxweyne noqdo madaamaa uu madaxtinnimadii Xisbiga ANC uu mar hore kaga guuleystay Mr: Mbeki. Maalmo yar ka hor ayey aheyd markii uu heshiisiiyey oo aad uga shaqeeyey dhibaataddii dalka ZIMBABWE, dalkaas oo dawlad xumo iyo sicir barar kan ugu sareeya dunida ay la degeen.
Mbeki intii uusan xafiiska ka tagin ayaa waxaa uu qudbad qiiro leh oo is casilaad u jeediyey qaranka taas oo uu si cad ugu qirrey in uu baneeyey kursiga madaxweynenimada dalka, sidoo kale wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr isagoo si toos ah usoo fariistey talefishanka qaranka ee channel SABC2 dadkoo dhanina ay si weyn loo sugayay, Mbeki ayaa hadalkiisa ku bilaabay go’aankii ay ANC gaartay ee ahaa in xilka uu isaga tago, wuxuu yiri “55 sanno ayaan kasoo mid ahaa ANC, iminkana waan ka mid ahay, waanan ka mid ahaan doonaa, daacad ayaanan u ahay xisbiga, sidaasi darteen waxaan aqbalay baaqii ay iisoo jeediyeen ee ahaa in aan is casilo, warqada iscasilaadayda waxaan ku wareejiyey gudoomiyaha Baaralamaanka Mrs. Baleka Mbete, waxayna dhaqan galaysaa marka baarlamaanka uu soo doorto qofkii I badalli lahaa Mbeki ayaa sidoo kale iska fogeeyey in uu waligiis wax farogalin ah ku sameeyey nidaamka xeer beegtida qaranka, wuxuu soo hadal qaaday in xukunkii xaakimka maxkamada sare ee ahaa in uu farogalin siyaasadeed ku sameeyey dacwada Zuma loo heystey ay ahayd arrin aanan sax ahayn.
Wuxuu sidoo kale shacabka ka codsaday in ay is dajiyaan, noloshooda sii wataan, isaga oo kaliya uu xilka ka tagayo, dowlada inteeda kalane ay usii shaqaynayso sidii caadiga ahayd.
Ugu dambeyntii waxa uu qaranka ku macsalaameeyey 11-ka luuqadood ee dalka looga hadlo, isagoo ku celcelinaya “waad mahadsantihiin”.
Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dhamaan wasiiradii madaxweyne Mbeki ay is casileen iyadoo markii hore la islahaa waxa xafiiska ku haraya oo kale nin ka u qaabilsan maaliyada oo aan isagu soo gudbin is casilaadisa balse markii danbe ku dhawaaqey inuu is casilay isaga iyo xog hayntiisa sidaasna ay isku wada casileen wasiiradii madaxweyne Mbeki
Balse ANC ma ahan wax ay dooneyso in ey wasiirada is casilaan, iyo barasaabyadaba, mana dooneyso in dalka ay ka dhacdo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo horseedi karra in ANC ay lumiso aqlabiyada doorashada soo socota.
Dhamaan xisbiyada mucaaradka ayaa si weyn u dhaleeceeyey ceyrinta Mbeki, kuna tilmaamay arrin qalad weyn ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay ay ugu horeyso xisbiga ay madaxda u tahay Democratic Alliance Party heweynayda la dhaho Hellen Zille waxaa sidoo kale ka mid ah xisbiyada dhaleeceeyey United Democratic Party (UDM) oo uu madax ka yahay Bantu holimisa, iyo IFP oo uu madaxka yahay Mangazuthu Buthelezi oo ah suldaanka beesha Zulu-ga. Dhamaantoodna waxay ku timameen inay aad uga xunyihiin is casilaada madaxweyne Mbeki iyo wasiiradiisa
Runtii waa arrin ku dayasho iyo xusidba mudan sida uu THABO MBEKI isugu dhejinin xafiiska, Hadaba, is bedelkaas u dhacay si nabdoon ee lagu sameeyay dal soo maray marxaladihii ugu xumaa, looguna badalay Diimuqraaddiyad islaaxda oo heshiis lagu yahay, ayaa waxa loo aqoonsanyahay inay tahay dhacdooyinkii ugu xusidda mudnaan doono adduunka ee qarniga 20naad iyo bilowga qarniga 21 aad. sanadkii 1993, Mandela iyo De-Klerk ayaa waxa si wada jir ah looga dhaxaysiiyay billada sharfta badan leh, ee loo yanaano Nobel Peace Prize.
Xaalada maanta dalka Koonfur Afrika marayo, xasiloonni darro haba ugu horreysee iyo xaaladihii uu soo maray ee aynu taariikhdiisa kusoo koobnay, marka lays garab dhigo. Wali waxad moodaa oo muuqanaysa inaanay dadka Madoow ee dalksaasi ku cibaaro qaadan wixii soo maray xanuun iyo xasilooni darro. Wixii iyaga xasuuq lagu samaynayay ee lagu takoorayay jinsiyadooda, dhaqankooda iyo hidoohada, ayaa waxa la moodaa inay aayar uun isaga ilaaween, maadaama ay iyaga laftarkoodu kula dhaqmayaan xanuunkii soo maray mid la mid ah, dad kale oo la diir iyo dub ahba. Sidoo kale waxaa Su’aalo badan oo ku saabsan xaaladaha nabad-gelyo, dhaqan-dhaqaale, caafimaad, iyo ijjimaaci, layska weydiinayaa mustaqbalka dalkan Koonfur Afrika …?
Sikastaba ha ahaatee waxaa la is dhihi karaa waxaa ka jirta wali diimuqraadiyad aad loogu faani karo, tusaalana lagu qaadan karo dalkan Koonfur Afrika, bilxaqiiqatan way ka hir gashay, oo waa astaan Qaaradeed. Ilaahayna wuxu u bixiyay hogaanno caadil ah oo haybad iyo karaamo gooniya uu siiyay, sida Nelson Mandela, ninkaas oo jiritaanka dhan ee dalkaba, ka sokow Ilaahay, isaga abaal loogu hayn karo. Hase yeeshee waxay sheekadan ku soo beegantay iyadoo madaxda soomaalida ee maanta ( Dawlad iyo Mucaarad ) ay ku kala dareereen shirkii Djabuti uga socday oo dadka Soomaaliyeed oo 18 sano dagaalo dhiig badani ku daatay iyo saboolnimo la kacaa ku faya wax uun rajo ah ka qabeen, mase arki doonaa hoggaamiyeyaasha Somalia oo u turaya dadkooda u turayaan uga tanaasula xafiiska iyo jagada .
Waxa idiin soo diyaariyay, isku soo dubba riday, soona ururiyay
Australia: Cop in murder probe 'threat'...
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 24, 2008
Safiirka Ethopia ayaa ka hadley sababaha uu u tago shirka Soomaalida uga socda Jabuuti... Wareysi Kooban ee SomaliTalk... Akhri... Sept 22
Wakiilka Qaramada Midoobey oo Maamulka Puntland ku eedeeyey Burcad badeedda
iyo Heshiiskii Shirkii Jabuuti oo Jahwareer culus soo food saartey... Akhri... Sept 20